Industrylọ ọrụ ọgwụ - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Lead Fluid Peristaltic pump bụ mgbapụta peristaltic nke china, nrụpụta mgbapụta peristaltic ọkachamara na China. Ọ na -etinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ire nke nfuli peristaltic, nfuli sirinji, nfuli gia ziri ezi na nfuli nnyefe mmiri ndị ọzọ na ngwa ndị metụtara ya, ma na -amalite imewe na ire nke sistemụ nchịkwa mmiri dị iche iche nwere ọgụgụ isi. Nweghachi azụ na ndụmọdụ teknụzụ.
Site na ntọala ya ruo ugbu a, Lead Fluid na -agbaso echiche nke ihe ọhụrụ, ịgbachi nkịtị, iguzosi ike n'ezi ihe, imekọ ihe ọnụ, na ndị ahịa mbụ. N'ịdabere na ndabere ụlọ ọrụ nke ya na uru ọrụ aka, ọ na -aga n'ihu na -emepụta usoro ngwaahịa dị elu n'ụwa, na -emeri ntụkwasị obi na ekele nke ndị ahịa.
Nchọpụta ọgwụ, mmepe na usoro nrụpụta na -achọ enweghị ọmụmụ, ikewapụ mmiri na enweghị mmetọ ikuku iji mesie usoro dị elu na nchekwa ngwaahịa ike na ụlọ ọrụ ọgwụ.
Mmiri mmiri na-adịghị mma dị oke mkpa na ngwa ahụike, ọ bụ ya mere nfuli peristaltic Lead Fluid ji dị mma maka usoro ndị a na-achọ.
Site na ntiwapụ nke ọrịa na 2020, nchekwa bio bio aghọwo atụmatụ isi obodo. Anyị kwesịrị ịdị njikere nke ọma ịnabata mgbanwe dijitalụ, netwọkụ, na ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na mgbanwe ụlọ ọrụ.
Pump peristaltic Lead Lead Fluid na-enye sistemụ mechiri emechi maka njikwa aseptic/sterile na-enweghị mmetọ.
Ngwa ndị akwadoro
BT103S mgbapụta peristaltic na-agbanwe agbanwe
2. Kwado njikọ WIFI na njikwa ekwentị mkpanaaka APP.
3. Mgbochi mgbochi siri ike, nchedo siri ike, nkwụsị ọsọ ọsọ, arụ ọrụ azụ, ọrụ mkpọchi igodo, mkpọtụ rotor akpọchiri, mkpu mkpuchi mmiri mmiri (nhọrọ).
4. Nkwado 5 ~ 24V obosara njikwa mpụga nke mpụga, nkwukọrịta RS485, dakọtara na usoro MODBUS.
BT600F-V3 na-enye mgbapụta peristaltic nwere ọgụgụ isi
1. 4.3-inch Super HD LCD ihuenyo mmetụ na ịrụ ọrụ.
2. Ọnọdụ na -asọba, na -ekesa olu mmiri mmiri, na -ekesa oge, na -ekesa okirikiri (mmemme) ọtụtụ ụdị nkesa bụ nhọrọ.
3. Kwado njikọ WIFI, mkpanaka APP ekwentị mkpanaaka, ma nwee ọrụ nleba anya dịka mkpu mkpọchi na ihe ncheta iji dochie ọkpọ mgbapụta.
4. Ọ nwere ọrụ ntụgharị ntụgharị, mmalite nkwụsị, ọsọ zuru oke, azụ azụ, na nkwụsị mmalite oge.
WSP microliter peristaltic mgbapụta
Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. na-elekwasị anya na imewe, mmepe, imepụta na ire ahịa nke nfuli peristaltic na nfuli sirinji nke ọma, ma gbaa mbọ na-enye ndị ọrụ ngwaahịa dị elu na ọrụ teknụzụ zuru oke. Na mgbakwunye na inwe usoro zuru oke nke nfuli peristaltic na ahịrị ngwaahịa mgbapụta sirinji, Mmiri ndu nwekwara ike nye ọrụ OEM ahaziri dịka mkpa onye ọrụ si dị. Ahụmịhe mmepe ngwaahịa tozuru oke nke Lead Fluid nwere ike ịnye gị ntuziaka ngwa ngwa yana ntụnye maka nfuli peristaltic na nfuli sirinji, wee nye ndị ọrụ ezigbo mma, nkenke dị elu na nnyefe mmiri dị ọnụ ahịa.